The Political Compass - ဝီကီပီးဒီးယား
Political self-test, political blog
အင်္ဂလိပ်၊ ဘူဂေးရီးယား၊ ချက်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ တူရကီ
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၀; ၂၀ နှစ် အကြာက (၂၀၀၀-၁၂-20)
The Political Compass သည် နိုင်ငံရေးအမြင်ကို ခန့်မှန်းခြေတိုင်းတာပေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မေးခွန်း ၆၂ ပုဒ်တွင် ဖြေကြားထားခြင်းကို အခြေခံ၍ နိုင်ငံရေးစပက်ထရမ်၏ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို နေရာချပါသည်။ မေးခွန်းဖြေကြားပုံမှာ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာကို "အလွန်သဘောတူသည်၊ သဘောတူသည်၊ သဘောမတူပါ၊ အလွန်သဘောမတူပါ" ဟူသောအဖြေများထဲမှ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံတွင် ထည်ထောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မူပိုင်ခွင့်ကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ "Pace News Limited" ဟူသောကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ထိုကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာမှာ ဝိန်း ဘရစ်တန်ဒန် (Wayne Brittenden) ဖြစ်သည်။ "The New York Times" သတင်းစာသည်လည်း ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဘရစ်တန်ဒန်မှ ပြုလုပ်ထားသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ တွမ် ယူတလေ (Tom Utley) ကမူ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်သည် "The World Action" ဟူသော ပရဟိတဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အစောပိုင်းဗားရှင်ကို "The World Action" ၏ဆာဗာ၌ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
"The Political Compass" မှ အသုံးပြုသော နိုင်ငံရေးအရပ်မျက်နှာများ
The Political Compass ၏ စပက်ထရမ်သည် ဝင်ရိုးနှစ်ခုပါသောပုံစံကို အသုံးပြုပါသည်။ ရေပြင်ညီဝင်ရိုးသည် စီးပွားရေး လက်ဝဲ-လက်ယာ ဝင်ရိုးဖြစ်သည်။ လက်ဝဲဖက်သည် တိုင်းပြည်စီးပွား‌ရေးကို အစိုးရကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်လိုခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ယာဖက်သည် တိုင်ပြည်စီးပွားရေးကို အစိုးရမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းများက ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးမှာ လူမှုနည်းအရ အာဏာရှင်-လွတ်လပ်မှု ဝင်ရိုးဖြစ်သည်။ အပေါ်ဖက်သည် အာဏာရှင်ကိုလိုက်နာရခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်ဖက်သည် လွပ်လပ်စွာနေထိုင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုပုံစံသည် ဒေးဗစ် နိုလန် (David Nolan) ရေးဆွဲထားသောဇယားနှင့်ဆင်တူပါသည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မောရစ် ဘရိုင်ဆန် (Maurice C. Bryson) နှင့် ဝီလီယမ် မက်ဒေးလ် (William R. McDill) တို့၏ရေးဆွဲမှုသည်လည်းကောင်း ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် အဲလ်ဘတ် မဲလ်ဆာ (Albert Meltzer) နှင့် စတူးအာ့တ် ခရစ်စတီ (Stuart Christie) တို့၏ရေးဆွဲမှုသည်လည်းကောင်း နိုလန်၏ဇယားနှင့် ဆင်တူကြသည်။
ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အမှတ်ပေးစနစ်ကိုရှင်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ သို့ဖြစ်ရာ တွမ် ယူတလေနှင့် ဘရိုင်ရန် မစ်ရှဲလ် (Biran Mitchell) တို့သည် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပက်သက်၍ ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ LiCalzi O'Connell၊ Pamela (4 December 2003)။ Online Diary။ The New York Times။
↑ PoliticalCompass.org WHOIS, DNS, & Domain Info – DomainTools။ WHOIS။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Utley၊ Tom။ "I'm v. Right-wing, says the BBC, but it's not that simple"။ "A lot of the questions in the test are very irritatingly phrased and impossible to answer properly, with only these four options available: "strongly agree", "agree", "disagree" and "strongly disagree" .
↑ "Shut Up, I'm A Libertarian", 11 July 2001 The Guardian. Retrieved9January 2018.
↑ "FAQ Q29". Politicalcompass.org. Retrieved9January 2018.
↑ The Political Compass။ The Political Compass (11 October 2013)။
↑ "Pace News Limited". Opencorporates.com. Retrieved9January 2018.
↑ ၈.၀ ၈.၁ Mitchell, Brian Patrick. "Eight ways to run the country". Greenwood Publishing Group. 2007. p. 143. ISBN 978-0-275-99358-0.
↑ Meltzer၊ Albert; Christie၊ Stuart (1970)။ "Party Lines and Politics"။ The Floodgates of Anarchy။ ISBN 0-900707-03-8။
↑ Bryson, Maurice C. (Summer 1968). "The Political Spectrum: A Bi-Dimensional Approach". Rampart Journal of Individualist Thought4(2).
↑ The Political Compass FAQ #25။ “Can you provide your scoring details[?]. [...] [W]e haveastrict policy against releasing this information”.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Political_Compass&oldid=692536" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။